सैन फ्रांसिस्को बाट होनोलुलु सम्म: तपाईको गर्मी भ्याक्सेशनका लागि उत्तम शहरहरू
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार » संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रेकिंग न्यूज » सैन फ्रांसिस्को बाट होनोलुलु सम्म: तपाईको गर्मी भ्याक्सेशनका लागि उत्तम शहरहरू
ब्रेकिंग यात्रा समाचार • व्यापार यात्रा • स्वास्थ्य समाचार • अतिथि सत्कार उद्योग • होटल र रिसोर्टहरू • समाचार • जिम्मेवार • पर्यटन • पर्यटन कुराकानी • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा रहस्य • यात्रा तार समाचार • संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रेकिंग न्यूज • विभिन्न समाचार
"भ्याक्स्यासन" भनेको के हो? केवल जस्तो देखिन्छ: COVID खोपको लागि छुट्टी।
अनुसन्धानले २०० वटा ठूला अमेरिकी शहरहरू compared० को एक रमाइलोको सूचकहरूको आधारमा तुलना गर्दछ।
गोल्डन सिटी तपाईंको गर्मी भ्याक्सेशनका लागि सर्वश्रेष्ठ शहरहरूको श्रेणीमा शीर्ष छ।
होनोलुलु समग्र No. नं नम्बरमा छ तर रमाईलो गर्न को लागी २ नम्बर र बाहिरका लागि नम्बर १।
नयाँ "तपाइँको ग्रीष्मकालीन भ्याकेसनका लागि सर्वश्रेष्ठ शहरहरू" आज जारी गरिएको थियो। अनुसन्धानले २०० भन्दा ठूला अमेरिकी शहरहरू रमाइलो (र सुरक्षित) भ्रमणको indic० सूचकहरूको आधारमा तुलना गर्यो - क्याब राइडको लागतदेखि औसत एयरबएनबी दर आकर्षणहरूको संख्यासम्म। र विशेषज्ञहरूले निश्चित रूपमा प्रत्येक शहरको खोप दरमा हेरे।
शीर्ष १० (र तल १०) गर्मी भ्याक्सेशन हटस्पटहरू हेर्नुहोस्, र यसका साथै रिपोर्टबाट केहि हाइलाइटहरू र हाइलाइटहरू।
२०२१ को तपाईको ग्रीष्मकालीन भ्याकेसनका लागि उत्तम शहरहरू
1 सान फ्रान्सिस्को, CA
2 पोर्टल्याण्ड, या
3 प्रोविडेन्स, RI
4 बगैचा ग्रोभ, CA
6 होनोलुलु, HI
7 जर्सी सिटी, NJ
9 लास भेगास, NV
10 न्यू अर्लिन्स, ला
२०२१ को तपाइँको गर्मी भ्याक्सेशनका लागि सबैभन्दा खराब शहरहरू
191 मेम्फिस, TN
192 सानो रक, एआर
193 पासाडेना, TX
194 मेस्क्वाइट, TX
195 जैक्सनभिले, FL
196 कान्सास सिटी, के.एस
197 बेकर्सफील्ड, CA
198 सूर्योदय मनोर, NV
199 ग्रान्ड प्रेरी, TX
200 उद्यम, NV
हाइलाइटहरू र लोलाईटहरू:
जाऊ स्यान फन्सिस्को: गोल्डन सिटी तपाईंको गर्मी भ्याकेसनको लागि र राम्रो कारणका लागि सर्वश्रेष्ठ शहरहरूको श्रेणीमा शीर्ष छ: सान फ्रान्सिस्को मजा लिनको लागि नम्बर १ शहर हो, आकर्षणको दोस्रो सर्वाधिक संख्या र सबैभन्दा जीवन्त रात्रि जीवनको प्रस्ताव राख्दै।
विज्ञहरूले हेर्ने समयमा सान फ्रान्सिस्कोले पनि कुनै ठुलो शहरको उच्च खोप दर बढाएको छ। (सिएटलले आधिकारिक रूपमा त्यस रेसको नेतृत्व गर्दछ - अहिलेको लागि - तर सान फ्रान्सिस्को ट्रेलको सह-ब्लेजिंग हो।)
सबै भन्दा राम्रो भाग? बे सिटी जून १ of सम्म पूर्ण रूपमा खुला छ, कुनै होल्ड गरिएको छैन तर "मेगा घटनाहरू" को लागि। त्यसकारण मास्क खाई गर्न को लागी स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस् - त्यहाँ पुग्न र सार्वजनिक ट्रान्जिटमा वरिपरि जान बाहेक - तर स्वेटशर्ट वा विन्डब्रेकर प्याक गर्नुहोस्। जसरी मार्क ट्वेनले (वा नहुन सक्छ) एक पटक भनेका छन्, "मैले अहिलेसम्म बिताएको सबैभन्दा चिसो जाडो सैन फ्रान्सिस्कोको ग्रीष्म wasतु हो।"
होनोलुलु रविमा रमाईलो: उत्तम आउटडोर अनुभव खोज्दै हुनुहुन्छ? त्यसोभए भन aloha लाई होनोलुलु। हवाईको राजधानी समग्र No. नम्बर मा छ तर रमाईलोको लागि २ नम्बर र बाहिरका लागि नम्बर १।
केवल लडाउनः यो प्यासिफिक प्याराडाईज होडिंग कोटिमा १ 166 No. नम्बरमा छ। यो औसत होटल रेटिंगहरू र तुलनात्मक रूपमा उच्च एयरबएनबी मूल्यहरूको कारण हो। तर कोही पनि वास्तवमा सूर्यबाट टाढा रहन होनोलुलु जान्छन्।
केवल तपाइँको खोप कार्ड (वा नकारात्मक COVID-१ test परीक्षणको प्रमाण) लाई राम्रोसँग पक्का गर्नुहोस्: बिग अनानास १ vacc० वटा ठूला शहरहरूलाई खोपका लागि बाहिर पुर्‍याउछ, हवाईले सबै आगन्तुकहरूलाई इनोकुलेटेड / कुनै लक्षण नदेखाउन वा अन्यथा १० दिनसम्म क्वारेन्टाइन राख्नु पर्छ। ।
नेभा नेभादा मा नेवा भन्छन्: सिन सिटी मेट्रो हाम्रो क्रमको विपरीत छेउमा अवतरण गर्दछ: लास भेगास नवौं स्थानमा छ र ११ औंमा प्याराडाइज, जबकि सनराइज मानोर १ 11 and मा समाप्त भयो र अन्तिम इन्टरप्राइज मरे।
त्यसैले सावधान रहनुहोस्: कुन दिशामा जाँदै हुनुहुन्छ त्यसमा निर्भर गर्दै, तपाईंले आफुलाई राम्रो सम्झनाहरू बनाउँदै वा केही मिनेटमा एक गर्मीमा विश्राम गर्नुहुनेछ। शुभ समाचार भनेको नेभाडा जून १ मा १००% क्षमतामा पुनः खोलियो (यद्यपि निजी व्यवसायहरूले अझै मास्कको आवश्यक पर्दछ)।
यदि तपाईं ग्रेटर भेगासबाट मिश्रित संकेतहरू बेवास्ता गर्न चाहानुहुन्छ भने २ north औं स्थानमा उत्तर पश्चिम रेनोमा ड्राइभ गर्ने विचार गर्नुहोस्। संसारको सबैभन्दा ठूलो सानो शहर भेगास (न।)) भन्दा अलि बढी घाम (नम्बर)) छ, र यो बाहिरी रमाइलोको लागि उपयुक्त छ: शिविर साइटहरूको अभाव छैन (न। १)) वा पिउने प्वालहरू।